I-Lomiri sele iyinyani kwi-Ubuntu Touch's OTA-12 | Ubunlog
Emva kweenyanga ezi-7 zophuhliso kunye ne-OTA-11 leyo Ndiyafika Ngeempawu ezintsha ezinjengebhodi yezitshixo ekrelekrele, ii-UBports zikonwabisile bhengeza ukumiliselwa kwe-OTA-12 ye-Ubuntu Touch, iprojekthi ebebeyiphethe ukusukela oko wayishiya iCanonical. Nangona ibandakanya iindaba ezibalaseleyo, mhlawumbi eyona ibalulekileyo yeyokuba inguqu iye kwi LomiriOko kukuthi, i yathiywa igama Ubumbano 8, ekuqaleni, kuba bekunzima kakhulu ukujongana nazo, kokubini kwincoko ethethiweyo nakuphuhliso lwayo.
Inani lobumbano elibandakanya oku kutsha Inguqulelo ngu-8.20, kodwa sithi oku kunje ukuzama ukungadali ukungangqinelani ngotshintsho lwamagama. Bona ngokwabo bayikhankanya njenge "Unity8 (Lomiri) 8.20", kwaye ayisiyiyo loo nto ibizwa ngokuba yiyo; kukuba bafuna ukuyenza icace kuthi into yokuba indawo yabo yemizobo ayisabandakanyi "umanyano" egameni layo, kodwa bayazi ukuba kusenokwenzeka ukuba kusekutsha kakhulu ukuqala ukusebenzisa "uLomiri" kuphela. Apha ngezantsi unoluhlu lweendaba ezibandakanya le OTA-12.
Iindaba ezivela kwi-OTA-12 kunye neLomiri yayo esandula ukukhutshwa
Utshintsho olupheleleyo kwi-Unity8, kubandakanya utshintsho oluninzi. Ngoku ibizwa ngokuba yiLomiri kwaye utshintsho kwikhowudi luya kugqitywa ngokuhamba kwexesha.
Utshintsho olubonakalayo kwiscreen sasekhaya, iDash, ngoku enemvelaphi emhlophe, kunye neDrawer njengoluhlu olutsha lwezicelo.
Uvavanyo oluzenzekelayo lokufumana iibhugi ezintsha kunye nokulungisa ezindala.
I-Mir 1.2, ihlaziyiwe ukusuka kwi-v0.24 ka-2015. Oku kubandakanya inkxaso yeWayland, kodwa ayikenziwa isebenze kwizixhobo ezisekwe kwi-Android. Iyasebenza kwiifowuni ezinje ngePinePhone kunye neRaspberry Pi.
Iphalethi yombala omtsha enika umahluko opheleleyo opheleleyo.
Ukuphuculwa kwebhodibhodi, kubandakanya ukuswayipha kwisenzo esisezantsi sokutshintsha ukusuka kwibhodi yezitshixo ukuya kuluhlu lokuhlela. Ukuba indawo engenanto yomaleko wokuhlela icofwe kabini, siya kubuyela kwisikhombisi nakwindlela yokukhetha.
Uphuculo kwisikhangeli seMorph, njengemowudi yabucala okanye iiapps ngoku zinokukhuphela iifayile.
Izixhobo ezinemibala emininzi ekhokelwayo ngoku zingayisebenzisa ukubonisa utshintsho lwenqanaba. Ukukhokelela kuya kuba kukudanyaza iorenji xa ibhetri iphantsi, iorenji eqinileyo xa ubiza kwaye uluhlaza xa ukutshaja kugqityiwe.
I-kernel efunekayo kwi-Anbox yongezwe kwii-kernels ezingagqibekanga ze-Nexus 5, OnePlus One, kunye neFairPhone 2.
I-OnePlus One ngoku ingcangcazela ngokuchanekileyo xa ucinezela amaqhosha.
Ngoku basebenzisa izitshixo zabo zikaGoogle OAUTH ukwenza kunye nokuvumelanisa abafowunelwa bakaGoogle kunye neekhalenda.
Okuninzi. Uluhlu olupheleleyo lweenguqu, apha.
Ukuphucula kule OTA-12 kwaye uqalise ukusebenzisa iLomiri, abasebenzisi abakhoyo kufuneka bafikelele kwiscreen Uhlaziyo loqwalaselo lwenkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ifowuni yeBuntu » Ubuntu Chukumisa i-OTA-12 ifika igqibezela inguqu ukuya eLomiri, eyayisaziwa njengeUniity 8
Oko bendimlandela okoko yaqala iprojekthi yokuthinta, andinakuze ndiyivavanye kodwa ndiyathanda ukuba uyaqhubeka nokukhula ...